» बन्दुके शैलीको अनुगमनदेखि २५ मिटर सडक विस्तारसम्मको विषयमा मउवा संघ अध्यक्ष कटुवालले मुख खोले
बन्दुके शैलीको अनुगमनदेखि २५ मिटर सडक विस्तारसम्मको विषयमा मउवा संघ अध्यक्ष कटुवालले मुख खोले
२०७५ बैशाख १०,सोमबार २०:३४
मकवानपुर, १० बैसाख । मकवानपुरको व्यवसाय जगतमा निकै नै समस्याहरु छन् । बजार व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । बजारका पसलहरुमा एउटै सामानको मुल्य फरक–फरक छ । बजार अनुगमन व्यवस्थित छैन, बजारका केहि पसलका खाध्य पदार्थको गुणस्तरको कुनै लेखाजोखा नै छैन, ती खाद्य पदार्थ सेवनले स्वास्थ्यलाई ठूलो हानि गर्ने सम्म देखिएको छ । यस्ता विषयहरुमा संचार माध्यमहरुमा समाचार पनि बेलाबखतमा प्रकाशन–प्रसारण हुने गरेका छन् । सुधार गर्ने सरोकारवालाहरुले पनि सुधारको आश्वासन दिंदै आएका छन् । सुधार आउन भने सकेको छैन ।
ठूलो कठिनाईका बावजुत मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघसहितको सरोकारवाला निकायले रोक लगाए पनि बजारको रोडसम्म सामान राखेर बेच्ने प्रचलन यथावत नै छ । यसको अर्थ व्यवसायीक जगतका सबै कुरा नराम्रा छन् भन्न खोजेको होईन तर केहि यस्ता बेथितिहरु छन् जसको कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्थामा छन् । यस्ता समस्याको निराकरणमा सरोकारवालाहरुको उपस्थिति कस्तो छ ? के उनीहरुले मात्र प्रयासले समस्या सुल्झिन्छ ? हामीले यही विषयमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालसंग वान–टु–वान वार्ता गरेका छौँ ।
प्रश्न–मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएपछि के–के काम गर्नुभयो ?
उत्तर – चुनाव जितेको लामो समय त भइसकेको छैन, तैपनि मैले मेरो कार्यकालमा आफुले व्यवसायीहरुको हितका लागि काम गर्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको छ्ु । चुनावमा व्यवसायीसंग मत माग्दा बोलेको कुराहरु अनुसार नै काम गरिरहेको छु । पहिलो चरणमा मैले खाध्य प्रविधिसंगको सहकार्यमा ३ पटक बजार अनुगमन गरेँ , ३० कोठे अतिथि सदन भवन निर्माण गर्नको लागि योजना तयार गरेको छु जसको साइत निकालेर भुमी पुजा समेत गरिसकेको छु । उक्त भवनको निर्माणका लागि नक्सा पासको काम भईरहेको छ । चाँडै नै शिलान्यासको काम समेत हुनेछ । आफुले सोचेको भन्दा बढी दाताहरुले सहयोग गर्ने जानकारी मलाई छ ।
त्यसैगरि कार्यालयमा हुने गरेको बेतिथिको अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी गरेको छु । कार्यालयमा हाजिर गर्ने प्रणाली समेत लथालिङ्ग भएको अवस्थामा आएको थिएँ तर हाल कार्यालयलमा ईलेक्ट्रोनिक हाजिर गर्ने मेसीनको व्यवस्था गरेको छु । कर्मचारीको डाटा निकालेको छु । संस्थाको हरेक खरिद विक्रीको प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको छु । अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ्ु । अन्य थुप्रै कामहरु गर्ने कार्य योजना तयार छन् र ती कार्यान्वय गरेरै छाड्नेछु ।
प्रश्न –बजार अव्यवस्थित छ ,उपभोक्ताको गुनासो उत्तिकै छ ? बेथिति बढ्दै गएको छ कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
उत्तर–म व्यवसायीको छाता संगठनमा छु । व्यवसायीको हितको लागि काम गर्छु तर यसको मतलब मैले व्यवसायीले जे गरेनी सहने भन्ने हुन्न । व्यवसायीले गरेका सहि कुराको सर्मथन गर्ने हो । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई सहज होस् भनेर मैले केही कार्ययोजनाहरु तयार पारेको छु । सर्वप्रथम बजार व्यवस्थित गर्नेछु ,जसको सुरुवात भईसकेको छ । पार्किङ व्यवस्थापनको लागि जिल्ला ट्राफिकसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने कार्य योजना छ ।, फुटपाथ व्यवस्थापन केहि हदसम्म गरिसकेको छु र अझै व्यवस्थित गर्नेछु । खाध्य पदार्थको गुणस्तर परिक्षण चेकजाँच गर्नेछु । सामानको मूल्य बारे अनुगमन गर्नेछु ,यसले सबैको हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रश्न– वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर कार्यभार सम्हाल्दा पुरा गर्न नसकेका केही कामहरु अध्यक्ष भएपछि पुरा गर्नुभो ? कि केहि अधुरा काम नै थिएनन् ?
उत्तर–पदले कार्यशैली र सहजतामा अन्तर त ल्याउछ नै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदापनि मैले निकै कामहरु गरेको छु । जुन हाम्रा व्यवसायीहरुले देख्नुभएको छ । अधुरा थुप्रै कामहरु छन् जुन मैले चुनावमै भनेको छु । कार्ययोजना अनुसार विस्तारै गर्दै जानेछु । २ बर्ष भित्रमा ३० कोठे भवनको काम चै सकाउने वातावरण बनाउँछु ।
प्रश्न–तपाई अध्यक्ष भएपछि काम गर्दै जाँदा केहि चुनौती वा दवाबको सामना गर्नु परेको छ ?
उत्तर–सबैको साथ नै छ । खुसी नै छु ।
प्रश्न–तपाईले चुनावमा अटो भिलेज निर्माण गर्ने , पल्पसा सभागृहलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवसायिक छुटको व्यवस्था गर्ने , व्यवसायिक प्रमोशन र तालिमको व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो कहिले गर्नुहुन्छ ?
उत्तर–हेर्नुस्, मैले बोलेको कामहरु पुरा गर्छु, मेरो बोली अलि रुष्ट छ । तर मैले अनावश्यक बोल्दिन र बोलेको गर्छु , मैले ३० कोठे अतिथि सदनको लागि भवन बनाउँछु भनेको थिएँ, त्यो २ बर्ष भित्रमा पुरा गर्छु , प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि छ । तालिम र गोष्ठीहरुको लागि पहल गरिरहेको छु चाडैं नै व्यवसायीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नेछु । हामीलाई व्यवसायीहरुले विभिन्न तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिनुस् भन्ने आग्रह समेत गर्नुभएको छ , जसअनुसार हामीले प्लस टु गरेका विद्यार्थीहरुलाई ७ दिन लेखाको तालिम दिने तयारी पनि गरेका छौँ ।
प्रश्न–वैदेशिक भ्रमणका योजनाहरु पनि छन् कि ?
उत्तर–हामी केहि टोलीको कोरियाको भिजा लागेको छ । तर व्यवसायीहरुलाई विश्वस्त गराउछाँै हामी फर्कदा केहि सीप पनि लिएर फर्कने छौँ । जसले रोजरारीमा समेत सहयोग मिल्ने छ , ईजराएलमा साउनमा कृषि तालिमकै लागि टोली पठाउने तयारी गरेका छौँ, त्यहाँको प्रविधि ल्याएर व्यवसायिक कृषिको काम गर्न पाईयो भने बजारमा राम्रो सन्देश पनि जान्छ । अनि कृषिमा केहि प्रगति पनि हुने आशा गरेका छौँ ।
प्रश्न– उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक व्यापार मेला गर्ने योजना बनाएको छैन ?
उत्तर– औद्योगिक व्यापार मेलाको पनि कार्य योजना छन् तर हामीले एक कार्यकालमा एउटा मात्र मेलाको आयोजना गर्ने छौँ । ३ बर्षको कार्यकालमा एउटा मेला गर्छौँ तर व्यवस्थित मेला गर्छौँ ।
प्रश्न – बजारमा सर्वसाधारणलाई नै असर पर्ने गरि सडकसम्म ल्याएर व्यवसायीले सामान बेच्छन्, ३ पाङ्ग्रे सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्थापन पनि निकै नै अस्तव्यस्त छ , तपार्इँ र तपाईको मउवा संघको पहल के हुन्छ यस विषयमा ?
उत्तर–यवसायीहरुलाई सचेत गराउँछु । ३ पांङग्रे सवारीको बिषयमा सहि प्रश्न सोध्नुभयो, यसमा हामीले नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी , जिल्ला ट्राफिक प्रहरी , यातायात व्यवस्थापनसंगको सहकार्यमा सवारी व्यवस्थापनको लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ, चाँडै व्यवस्थित हेटौँडा बनाउन पहल गर्ने छौँ ।
प्रश्न–२५ मिटर सडक विस्तार हुनुपर्छ कि पर्दैन अध्यक्ष ज्यू ?
उत्तर–२५ मिटर सडक आवश्यक छ । तर यसको मतलव व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी होईन , बजार एरियामा १६ मिटरको अवधारणा ठिक छ , किनकी सबै घरधनीहरुलाई मुआब्जा दिन सरकारसँग बजेट नहुन सक्छ अनि मुआब्जा बिना घर भत्काउँदा जनतामाथि अन्याय हुन्छ । त्यसकारण बजार क्षेत्रमा १६ मिटर सडक विस्तार गरी बाहिर राजमार्गमा भने आवश्यक मात्रामा सडक विस्तार गर्दा हुन्छ ।
प्रश्न : अन्तिममा केही भन्नै पर्ने कुरा छन् कि ?
हामीले गरेको राम्रा काममा संचार माध्ययमहरुले सर्मथन गरिदिनुपर्छ ,नराम्रा कामको भण्डाफोर गरिदिए हु्न्छ । बजार अनुगमन अलि सभ्य शैलीमा हुनुपर्छ, मउवा संघ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगाएत सरोकारवालालाई समावेश गरेर मात्र बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । बन्दुके शैलीमा बजार अनुगमन गर्न हुन्न । ट्याम्पु, अटो मयुरीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुमोको काउण्टरहरुको व्यवस्थापन खाली स्थानमा गर्नुपर्छ । यसले पनि बजार निकै नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । नगरपालिकाले पनि यस्ता कुराहरुमा सक्रियता देखायो भने हाम्रा व्यवसायीहरुलाई सहजता दिलाउँछ । र पत्रकारहरुले देखेको समस्याको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नुपर्छ जसका कारण हामीलाई कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ जानकारी होस् ।
प्रेस काउन्सिलको युवा पत्रकारिता पुरस्कार २०७७ बाट तु खबरका सम्पादक अधिकारी सम्मानित
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी हेटौंडाका ४५ जनाले गरे जसपामा प्रवेश
मकवानपुरका ८ सहित बागमती प्रदेशमा थपिए ७१९ जना कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, दुबै जना बागमतीका
नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या ४८ हजार नाघ्यो, कुन प्रदेशमा कति ?
नेपालमा थप १३५६ जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या ६६,६३२ पुग्यो
कोरोना संक्रमणबाट काभ्रेमा थप एक महिलाको मृत्यु
राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल हेटौंडाद्वारा मेयर महतलाई ज्ञापनपत्र
पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु